Lakkoobsi Namoota Addunyaa Irraa Vaayiresii Koronaan Qabamanii Miliyoona 13 Darbe
Adoolessa 14, 2020
Addunyaa kana irraa lakkoobsi namoota vaayiresiin koronaan qabamanii miliyoona 13 caalee kanneen du’an immoo 570,000 ol ta’ee ennaa jiru kanatti Yunaayitid Isteetis xumura baatii bonaa irra talaallii oomishuun eegala jechuun kan abdattu ta’u beeksiste.
Mootummoonni hedduun uggura sochii kaasanii turan deebiisani kaa’uu dhaan qajeelfama wali irraa hiiqiinsa hawaasummaa fi namoota vaayiresii kanaan qabaman qofaatti baasuuf jiru cimsaa jiran.
Caasaa oduu CNBC jedhuuf kaleessa ibsa kan kennan angawaa gameessi bulchiinsa Traamp tokko oomishi talaallii kanaa inni kam sirriitti haa hojjetu hin mirkaneeffatinuu malee jalqabameera jedhan. Angawaan kun akka jedhanitti meeshaan ittiin oomishanii fi bakki oomishaa qophaa’eera jedhan.
CNBCn akka jedhetti kampanileen lama kanneen talaallii kana oomishan Moderna fi Johanson &Johonson yaalii nama irratti ta’u sadarkaa xumuraa xumura baatii kanaatti jalqabu jedhamee eegama.
Hong Kong ennaa geejjiba uummataan adeeman maaskii kaayyachuun dirqama ta’uu beeksisuu dhaan kanneen kana irra darban doolaara $645 adabdi.
Austraaliyaa kutaa gama kibbaa Viktooriyaa keessaa namoonni 270 haaraa COVID 19n qabamuun yoo gabaasamu lama du’aniiru. Kunis lakkoobsa namoota biyyattii keessaa Koronaan qabaman 10,251n kan ga’e si’a ta’u 110 du’anii jiran.
Briteen keessaa lafa gabaa fi suqiiwwan ennaa dhaqan maaskii kaayyachuun torban dhuftuu kaasee dirqii ta’uun beekamee jira. Geejjiba uummataa keessatti maaskii kaayyachuun durumaa dirqama ture.
Yunaayitid Isteetis keessaa namoonni 60,000 kaleessa haaraa vaayiresii koronaan qabamanii jiran. Kutaalee hedduun dinagdee isaanii bananii turan weerarri kun deebisee waaan ka’eef deebisani cufuuf dirqamaa jiru.
Yaadawwan Ilaali (2)
Kutaaleen Ameerikaa Filannoo Marsaa Duraa Kan Bakka Bu'ootaf Sagalee Kennaa Oolan
Sudaan Seera Kittaannaa Eeyamu Kan Biyya Ishee Dabalatee Ka Biroos Ni Haqxe
Poolisiin Ariifatee Qorannaa Mirga Haqaa Irratti Hundaa’e Geggeessuu Qaba: Abukaatoo Obbo Baqqalaafaa
Addi Bilisummaa Uummata Tigraay Mootummaan Federaalaa Namoota Seeraan Ala Hidhe Haa Hiiku Jechuun Gaafate
Mariin Hidha Laga Abbayyaa Walii Galtee Irra Utuu Hin Ga’amin Hafe
Hookkara Ka’eef Sababaan Mootummaan Gaaffiilee Uummata Oromoo Sirnaan Deebisuu Dhabuu Dha, Jedhu Abbaa Gadaa Goobala Hoolaa Irreessoo
Waa'ee Ajjeechaa Artist Haacaaluu Hundeessaa Irratti Raaw'atamee Waajirri Abbaa-alangaa Muummichaa Itiyoophiyaa Maal Jedha?
Sirini Yaadannoo Artist Haacaaluu Hundeessaa Magaalaa Finfinneetti Geggeessame
Yunaayitid Isteetis Kessatti COVID -19 Hammaataa Ennaa Adeeme Kanatti Uummati Maaskii Akka Kaayyatu Jajjabeeffamaa Jira
Mootummaan Naanno Amaaraa Namoottan Too’annoo Jalaa Oolcheef Akka Mirgaa Seeraa Kabajuu Koreen Mana Mare Bakka-bu’ootaa Hubachiise
Buqaatota Naannoo Afaariif Gargaarsii Dabalataa Akka Barbaachisu ibsame
Afa-yaa’iin Mana Maree Itiyoophiyaa Ajjeechaa Gambeellaatti Raaw’atan Gurmuulee Qoratan Bobbaasuu Dubbatan
Koreen Seenetii Yunaayitid Isteetis Nyaata Akka Meeshaa Waraanaatti Fayyadamuu Baleeleffate
Aangawaan Gamtaa Awurooppaa Itiyoophiyaan Boba’aa Gahaa Gara Tigiraayiti Ergaa Akka Hin jirre Dubbatan